घुमफिर Archive - Alagdhar
काठमाडौँ, ३० कात्तिक: ‘हट एयर’ बेलुनमा उडेर अब पर्यटकीय नगरी पोखराको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न पाइने भएको छ । बेलुन प्रालि नेपाल, काठमाडौँले नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल साहसिक खेल बेलुनमा बसेर पोखराको मनोरम दृश्यावलोकन गर्ने चाँजोपाँचो मिलाउँदैछ । उडान शनिबार बिहानबाट शुरु हुने प्रालिका सञ्चालक सदस्य प्रवीण महर्जनले जानकारी दिनुभयो । “भोलि बिहान बिहान ९ बजे पोखराको लेकसाइडबाट पहिलो उडान शुरु हुनेछ, हामीसँग दुईवटा बेलुन छन्, पहिलो चरणमा हामी एउटा मात्र उडाउँछौँ, एउटामा एक पटकमा आठ...
एकै महिनामा ८७ हजार पर्यटक, सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक
काठमाडौँ : अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको अगस्ट महिनामा पर्यटकको आगमन झण्डै १९ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । हवाई तथा स्थल मार्गबाट अउने पर्यटकको संख्यामा गएको वर्षको यहि अवधिमा भन्दा केही बढेको देखिएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । गएको अगस्ट महिनामा नेपालमा ८७ हजार ६७९ जना पर्यटक आएको बोर्डले जनाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको यहि अवधिको भन्दा झण्डै १५ हजार बढी हो । गएको वर्षको अगस्ट महिनामा ७३ हजार ७७८ पर्यटक हवाई तथा स्थल मार्ग भएर नेपाल आएका...
दाङ । दाङका स्थानीय युवाले मिलेर करिब १० करोड लगानीमा ‘दाङ फन पार्क’ निर्माण गरिरहेका छन्। जिल्लामा एउटा पनि फन पार्क नभएको हुँदा त्यो अभाव पुरा गर्न युवाहरु मिलेर फन पार्क निर्माण गर्न लागेको नारायणपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अभियान बस्नेतले जानकारी दिए। दश जना युवाहरुको लगानीमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १० स्थित दक्षिण अमराईमा आधुनिक फन पार्क निर्माणको काम धमाधम भइरहेको लगानीकर्तासमे रहेका बस्नेतले जानकारी दिए। फनपार्क निर्माण गर्न झन्डै दश करोड जति लाग्ने पूर्व अनुमान अनुसार हालसम्म डेढ...
इलाम घुम्ने सिजन
लहरै चियाको हरियो गलैंचामा नीलो आकाश र सेतो हिमाल पृष्ठभूमि राखेर फोटो खिच्न पाए स्वर्गै पुगिएला भन्ने लागेको थियो पोखराका रोमन गुरुङलाई। नभन्दै, उनी इलाम पुग्न योजना बनाएको लामो समयपछि यहाँ आइपुगे। इलामका कन्याम, अन्तुडाँडा र सन्दकपुर पुग्न उनले योजना बनाएकै ५ वर्षै बितेछ। तर, कहिल्यै भनेजस्तो ‘साइत’ जुरेन रे। ‘इलामको चियाबारी, अन्तुडाँडा, इलाम बजार, माइपोखरी र सन्दकपुरको नाम सुन्नेबित्तिकै घुम्न आउन मन लागेको थियो,’ उनले सुनाए, ‘निकै समयपछि साइत जुर्‍यो।’ पत्नी र छोरासहित कन्याममा भेटिएका गुरुङले सुनाए, ‘हाम्रो...
नयाँ वर्षमा खप्तड घुम्न जाने ?
नयाँ वर्ष २०७४ मा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण गर्न चाहना छ ? हेमन्त ऋतुमा खप्तड । फाइल तस्वीर: दीर्घराज उपाध्याय नयाँ वर्षका लागि सात दिनको समय छुट्याउनुहाेस् र साथमा कम्तिमा १५ हजार रुपैयाँ राख्दा राम्रो हुन्छ । खप्तडको सात दिने यात्रा पहिलो दिनः महेन्द्रनगर/धनगढीबाट प्रस्थान, बाटोमै खाना र दिपयाल बास । दोस्रो दिनः खाजा, झिङ्ग्राका लागि प्रस्थान । झिङ्ग्रामा दिउसको खाना, पाँच घण्टा उकालो हिडेपछि बिचपानी । बिचपानीमै रातिको खाना र बास । तेस्रो दिनः प्याकिङ्ग खाजा । ४ घण्टा हिडेपछि खप्तड ।...
रारा स्वर्गकी अप्सरा
प्रकृतिको सुन्दर उपहार रारा हेर्ने भनेपछि कसको मन प्रफुल्ल नहोला ! काठमाडौंको कंक्रिट जंगलमा बसेर यान्त्रिक रूपले सधैं एउटै काममा लागिरहँदा शरीरसँगै मस्तिष्क पनि थकित हुन्छ । शरीरलाई सक्रिय बनाइराख्न आरामका साथै मनोरञ्जन पनि चाहिने रहेछ । यसैले पनि रारातर्फको यात्रा रोमाञ्चक थियो । झोलामा पानी, बिस्कुटका प्याकेट, लत्ताकपडासहित बन्दोबस्तीका सामान बोकेर अघिल्लो साता १० जनाको टोली कर्णालीको यात्राका लागि काठमाडौंबाट त्रिभुवन विमानास्थलतर्फ सोझियौं । राराको रहरले मन यसै उफ्रिरहेको थियो । हाम्रो यात्रामा सामेल हुन काठमाडौंबाट सदस्य थपिँद...